Wafti heer deegaan ah oo booqasho shaqo ku gaadhay qaarka mid ah mashaariicaha MDG ee gobolka Siti. - Cakaara News
Wafti heer deegaan ah oo booqasho shaqo ku gaadhay qaarka mid ah mashaariicaha MDG ee gobolka Siti.
Shiniile(CN) Arbaca, 11, November, 2015, Waftigan oo ay hogaaminayeen madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar iyo wasiir ku xigeenka biyaha DDSI mudane Cabdirahmaan curaagte ayaa socdaal shaqo ku gaadhay mashaariicaha horumarineed ee MDG ee ka socday tuulooyin ka mid ah gobolka siti.
Haddaba wasiir ku xigeenka xafiiska biyaha DDSI mudane Cabdiraxmaan Curaagte oo u waramayay shabakada wararka ee cakaaraNews ayaa warbixin dheer naga siiyay ujeedada socdaaka waftiga wuxuuna sheegay in Xukuumada DDSI oo ka duulaysa taabo galinta meel marinta mashaariicaha horumarineed iyo ka jawaabida baahiyaha bulshada deegaanka in ay dhawaan go’aamisay in mashaariicaha MDG ee ay gacanta ku hayeen shirkada dhismaha hawlaha biyaha DDSI iyo shirkada biyaha ee oromiya in mashariicihii ay dhameeyeen ee ay ka wadeen gobolka siti ku wareejiyaan xafiiska biyaha DDSI si ay u qabtaan shaqooyinkii loogu talagalay ugana faa’iidaystaan shacabkii loogu tala galay.
Wasiir ku xigeenka isaga oo sii wada hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in xafiiska biyaha DDSI isaga oo ka duulaya hirgalinta awaamiirtaasi uu bilaabay meelmarinta qorshahaa wuxuuna sheegay in xafiisku uu geeyay kooxihii fulinaya qorshahaa iyo qalabkiiba si looga faa’iideeyo shacabka.
Wuxuuna tilmaamay wasiir ku xigeenku in ay waftigan ay isaga iyo madaxwayne ku xigeenku hogaaminayaan ay booqasho shaqo ku soo mareen mashaariicahaa lagu wareejiyay xafiiska biyaha oo shaqadoodii bilaabay kana faa’iidaysanayso bulshadu mashaariicahaa oo kala ahaa METTA BISLE project marshruuca oo ay dadka iyo duunyaduba ka cabayaan biyo nadiif ah, waxaa kale oo shaqadii bilaabay ayuu yidhi wasiir ku xigeenka mashruuca DAD 1 iyo DAD 2 kuwaa oo ay shacabku ka faa’iidaysanayaan. waxaa kale oo uu sheegay masuulku in ay kooxdan ka socoday xafiiska biyuhu ku guulaysteen mashruuca DAD ee biyo baxay galinta laydhka 24ka ah kaasi oo ka dhigaya in mashruucu si dhibyar oo aan kharashbadani ku bixin looga faa’iidaysan karayo halka ay markii hore dhinaca shidaalka laydhka kharash aad u badani ku bixi jirtay.
Isku soo wada xooriyoo mashaariicahan harumarineed oo ah mashruucaha MDG ayaa xukuumada DDSI dadaal balaadhan galisya hirgalintiisa taasina ay midho dhalkeedii tahay tan maanta dadka iyo duunyaduba ka heleen biyo nadiif waxayna uga faa’iidaysan doonaan dhianca wax soo saarka beeraha waxayna si mug leh uga qayb qaadanayasaa xal u helida abaaraha ka jiray gobolka Siti,